Maamulka Deg Caabudwaaq oo ugu baaqay Beelo dagaalamay Nabadgeliyo – SBC
Maamulka Deg Caabudwaaq oo ugu baaqay Beelo dagaalamay Nabadgeliyo
Maamulka Degmada Caabudwaaq ee Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa Baaq nabadgeliyo u jeediyay Beelo walaalo ah oo 24tii saac ee ugu dambeeyay ku dagaalamay gobolka kuwaasi oo dagaalkoodu sababay khasaare.
Deegaanada Banjeele iyo Miirxeyley oo ka tirsan degmada caabudwaaq ee gobolkaas Galgaduud ayaa dagaalka ku dhexmaray beelahan, waxaana ku dhintay ku dhowaad 2 qof 5kalena waa ay ku dhaawacmeen sida uu saxaafada u sheegay gudoomiyaha DKMG ah ee Caabudwaaq Xasan Caabudwaaq.
“Halkaas Dagaal ayaa ka dhacay, dhimasho iyo dhaawacna way ka dhasheen, waxaan ugu baaqeynaa beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku dagaalamaya in ay dagaalka joojiyaan ilaaliyaana nabadgeliyada” ayaa ka mid ahaa hadalada gudoomiyaha DKMG ah ee Degmada Caabudwaaq Xasan Caabudwaaq.
Mudooyinkii ugu dambeeyay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ku soo laa laabanayay xiisadaha colaadeed oo dhexmaraya beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku dhaqan, inkastoo dagaaladaasi aysan aheyn kuwo sidaasi u sii dheer oo aan sababay khasaare xoogan.
Dagaalada dhexmara Beelaha ku wada dhaqan gobolkaas ayaa badankood waxa ay ka kacaan arimo ku aadan Dhirjarista, Ceelasha biyaha kala cabo iyo weliba deegaameynta, waxaana gebi ahaantood ay u badan yihiin kuwo ka dhaca dhanka miyiga .